La kulan – ninka beeray 5 Milyan oo geed! | Radio Himilo
Home / Deegaan / La kulan – ninka beeray 5 Milyan oo geed!
La kulan – ninka beeray 5 Milyan oo geed!
Posted by: Mahad Mohamed January 29, 2019
Himilo FM – Vishweshwar Dutt waxa uu dhintay 18-kii bishan Janaayo hase ahaatee xusuustiisa kama guuri doonto dadkii uu la noolaa iyaga oo ula baxay “ Ninkii geedaha Uttarakhan”
Waxa uu ahaa nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka oo abuuray 5 Milyan oo geed isaga oo u badalay gurigiisa keyn weyn. Dutt waxa uu ahaa qof jecel dhirta, waxa uu talaalay geedkiisii ugu horreeyay isaga oo 8 jir ah markaasi oo uu hagayay adeerkii.
Muddo 70 sanno ah ayuu ku jiray beerista geedaha illaa markii danbe uu waayay araggiisa islamarkaana uu la kulmay culeysyada da’da fog.
Si kasta, jeceylka Dutt ee geedaha waxa uu noqday mid shaac baxay oo si weyn looga oggaa tuuladiisa Pujargaon ee dalka Hindiya, waxaana uu geedaha ugu yeeri jiray magacyada carruurtiisa ama dadka ku dhaw.
Qaraabada ninka reer Hindiya ayaa sheegay in markasta oo uu la kulmo murug in Dutt uu wakhti badan ku qaadan jiray geedaha iyo beeristooda. Waxay tusaale u soo qaateen markii uu waayay walaalkii Nagendra Dutt oo ahaa nin u ololeeya arrimaha bulshada, dhimashada walaalkii kaddib, waxa uu Dutt subax kasta u bixi jiray inuu talaalo geedo badan maalintii oo dhan.
Sidaasi si lamid ah, sannadkii 1958-dii, markii ay geeriyootay xaaskiisa, waxa uu mar kale bilaabay inuu wakhti badan geliyo beerista geedaha oo uu ku hilmaami jiray xannuunka heysta.
Ninka lagu naaneesi jiray ““Ninkii geedaha Uttarakhan” ayaa la aaminsan yahay inuu abuuray 5 Milyan oo geed oo kala nuuc ah. Dadka deegaankiisa ayaa markii hore kaga horyimid tallaabada laakiin markii danbe isla sababtaasi ayay u jeclaadeen.
Previous: PSG oo Chelsea ku garaacday saxiixa Leandro Paredes
Next: Mareykanka: Haweenay muddo seddex maalin ku xanibneyd wiish
La kulan – Aabaha u gaaroobay waxbaridda iyo Tarbiyadda carruurta
Maxaa jaamacadaheenna u diidaya inay Af-soomaaliya ku soo daraan Takhasusyada?
Kaalinta Tubaakada ee u nugleynta jirka cudurrada